UKRAINE OO U YEERATAY DANJIRIYAASHII U JOOGAY MOROCCO IYO GEORGIA | dayniiile.com
Home WARKII UKRAINE OO U YEERATAY DANJIRIYAASHII U JOOGAY MOROCCO IYO GEORGIA
UKRAINE OO U YEERATAY DANJIRIYAASHII U JOOGAY MOROCCO IYO GEORGIA
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyy ayaa u yeeray danjiriyaasha u fadhiyay dalalka Morocco iyo Georgia, ka dib markii diblomaasiyiintan ay ku guuldareysteen in ay ka dhaaciyaan dalalka ay joogeen in ay cunaqabateyn saaraan Russia maadaama uu ku soo duulay dalkiisa.
“Anigoo idin xushmeynayna, hadaadan hub heysan, oo cunaqabateyn saari Karin ama aadan xayiri Karin ganacsatada Russia, fadlan shaqo kale raadsada,” ayuu Zelenskyy ku yiri khudbad xalay u jeediyay dadkiisa.
“Maalmaha soo socda waxaa filayaa natiijo cad oo ka soo baxda dalalka; Latin Amerika, Afrika, Bariga dhexe iyo Koofur Bari Aasiya,” ayuu ku daray hadalkiisa.
Madaxweyne Zelenskyy, ayaa todobaadyadii u dambeeyay wuxuu khudbado u jeedinayay baarlamaanada dalalka caalamka, isagoo ku boorinayay in ay taageeraan Ukraine isla markaana ka soo hor jeestaan duulaanka Russia.
Hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya xilli wefdi ka socda Ukraine ay ku sugan yihiin Washington si Mareykanka uga dhaadhiciyaan in uu kordhiyo cunaqabateynta Russia.
Sidoo kalena waxay codsanayaan in taageero militiri iyo mid maaliyadeed lagu bari taaro Ukraine oo xilli adag ku jirta.
Maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa hormuud u ah jawaabta dalalka reer galbeedka ka bixiyeen duulaankii Russia ee 24 bishii hore, ayagoo ku soo rogay Russia cunaqabateyn adag, sidoo kale Ukraine siiyay hub iyo dhaqaale.
Duulaanka Russia ee Ukraine ayaa galay todobaadkii shanaad, waxaana colaadaas ku dhintay kumanaan reer Ukraine ah halka Malaayiin kale u firxadeen dalalka deriska ah.
Previous articleHormuud Salaam oo deeq gaarsiisay Xabsiga Dhexe & Isbitaal Martini Bisha Diyaar Garowga Bisha Ramadaan
Next articleMadaxweyne Qoor Qoor oo Guddoomiye Cusub u Magacaabay Gobolka Mudug